भारतबाट भित्रिने खसीबोका ५० प्रतिशतले घट्यो, यस वर्ष २ लाख ३५ हजार खसीबोका भित्रिए
असोज २०, काठमाडौं । विगतका वर्षहरुको तुलनामा भारतबाट यस वर्ष नेपालमा खसीबोका भित्रिने क्रम निकै घटेको पाइएको छ । नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाएपछि भारतबाट नेपालमा भित्रिने खसीबोका वार्षिक दरमा यस वर्ष करीब ५० प्रतिशतले कमी आएको हो । पशु सेवा विभागका अनुसार भारतबाट मात्रै वार्षिक रुपमा करीब चारदेखि पाँच लाख खसीबोका नेपाल भित्रिने गरेको अघिल्लो वर्षसम्मको तथ्यांक छ । तर यस वर्ष सो संख्यामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कमी आएको छ । यस वर्ष हालसम्म करीब २ लाख ३५ हजार खसीबोका भित्रिएको तथ्यांक रहेको विभागले जनाएको छ । जुन यो वर्षभरिको तथ्यांक हो ।
भारतबाट आयात हुने खसीबोकाको भन्सार दर वृद्धि हुनु, स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुलगायत कारणले भारतबाट नेपालमा हुने आयातमा कमी आएको विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकाल बताउँछन् । नेपालमा वार्षिक १ करोड २० लाख खसीबोका र बाख्रा उत्पादन हुने गर्दछ । जसमध्ये करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खसीबोका उत्पादन हुने तथ्यांक रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
यसैगरी डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्राले पनि राम्रो बजार पाएका छन् । सो क्षेत्रमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्राले काठमाडौं, पोखरा लगायत नेपालका विभिन्न बजारमा राम्रो बजार पाएको पशु सेवा विभागले बताएको छ । स्वदेशी खसीबोका र च्याङ्ग्राले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएपछि किसानसमेत उत्साही भएको पशु सेवा विभागले बताएको छ । जसले गर्दा अब खसीबोका उत्पादनमा नेपाली बजारसक्षम बन्न सक्ने विभागका सूचना अधिकारी डा. ढकाल बताउँछन् ।
यस वर्ष दशैं पर्वलाई लक्षित गरी भारतबाट प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा खसीबोका भित्रिने संख्या पनि निकै कम छ । दशैं पर्वलाई लक्षित गरी भारतबाट प्रक्रिया पूरा गरी खसीबोका भित्रिने क्रम अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष निकै कम रहेको पशु सेवा विभागले बताएको छ ।
१४००.३१ विन्दुमा नेप्से, ९९ करोडको शेयर कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७६ फागुन, ७]
माटो बिना खेति गर्न सकिने प्रविधि प्रदर्शनीमा[२०७६ फागुन, ७]
२.३७ अंकले घटेको नेप्से १३९७.६४ विन्दुमा (१ बजेको अपडेट)[२०७६ फागुन, ७]